Bit By Bit - Lamesa fiaraha-miasa - 5.2.2 Vahoaka-Coding ny ara-politika fandaharan'asan'izy
Similar ny kintana Zoo, maro ireo toe-javatra izay mpikaroka ara-tsosialy te-kaody, manasokajy, na hiantso sary na sombin-dahatsoratra. Ohatra iray amin'izany karazana fikarohana dia ny Coding fandaharan'asan'izy ara-politika. Nandritra ny fifidianana, antoko politika miteraka fandaharan'asan'izy mamaritra ny politika sy ny toerana mitarika filozofia. Ohatra, indro misy tapa-Ny fanambarana ampahibemaso ny Antokon'ny Mpiasa any Grande-Bretagne tamin'ny 2010:
Fandaharan'asan'izy ireo ahitana tahirin-kevitra sarobidy ho an'ny mpahay siansa ara-politika, indrindra fa ny fianarana ireo fifidianana sy ny fihetsehana ny adihevitra politika. Mba hanesorana amin'ny fomba vaovao avy amin'ireo fandaharan'asan'izy, mpikaroka namorona ny Manifesto Project , izay nikarakara ny mpahay siansa ara-politika code 4.000 avy amin'ny efa ho 1.000 fandaharan'asan'izy antoko ao amin'ny firenena 50. Fehezanteny tsirairay isaky ny fanambarana dia kolaka izany ny manam-pahaizana manokana mampiasa 56-category rafitra. Ny vokatry ny fiaraha-miasa io dia goavana dataset mamintina ny fanazavana nandinika lalina fandaharan'asan'izy ireo, ary izany dataset efa nampiasaina tamin'ny mpahay siansa maherin'ny 200 taratasy.
Kenneth Benoit sy ny mpiara-miasa aminy (2015) dia nanapa-kevitra ny hitondra ny fanambarana Coding asa izay aloha no tanterahana amin'ny alalan'ny manam-pahaizana sy hiverina ho any amin'ny olona tetikasa computation. Ho vokany, dia namorona ny Coding dingana izay kokoa reproducible sy malefaka kokoa, tsy lazaina intsony mora kokoa sy haingana kokoa.
Niara-niasa tamin'ny 18 fandaharan'asan'izy niteraka nandritra ny enina vao haingana ny fifidianana ao amin'ny UK, Benoit sy ny mpiara-miasa nampiasa ny fisarahana-ampiharina mitambatra tetika amin'ny mpiasa avy amin'ny micro-asa asa tsena (Amazon Mechanical Turk sy CrowdFlower dia ohatra ny micro-asa asa tsena, fa more amin'ny asa madinika asa tsena toko 4). Ny mpikaroka samy naka fanambarana ka nampitresaka azy ho fehezanteny. Manaraka, olombelona Rating dia ampiharina amin'ny fehezanteny tsirairay. Indrindra indrindra, raha ny fanamelohana ny politika tafiditra fanambarana, dia kolaka izany niaraka lafiny roa: ara-toekarena (avy tena ankavia tena havanana) sy ny ara-tsosialy (avy amin'ny liberaly ny drazana) (Sary 5.5). Fehezanteny tsirairay dia kolaka izany ny tokony ho 5 isan-karazany ny olona. Farany, naoty ireo dia mitambatra mampiasa ny antontan'isa modely izay isaina ho an'ny tsirairay sy ny fahasarotan'ny rater vokatry ny didim-pitsarana vokatry. Rehetra, sy ny mpiara-miasa Benoit nanangona 200.000 naoty avy amin'ny tokony ho 1,500 mpiasa.
Sary 5.5: Coding tetika avy Benoit et al. (2015) (Fig 1).
Mba hijery ny hatsaran'ny ny vahoaka Coding, Benoit sy mpiara-miasa koa ny 10 manam-pahaizana-mpampianatra sy ny mpianatra nahazo diplaoma tao politika Science-tahan'ny mitovy fandaharan'asan'izy mampiasa ny fomba toy izany koa. Na ny naoty avy amin'ny mpikambana ao amin'ny vahoaka dia miova kokoa noho ny naoty avy amin'ny manam-pahaizana, ny marimaritra iraisana ampy nanana vahoaka miavaka fanekena ny marimaritra iraisana ampy manam-pahaizana (Sary 5.6). Io fampitahana mampiseho fa, toy ny amin'ny Galaxy Zoo, computation tetikasa olombelona dia afaka mamokatra vokatra ambony kalitao.
Sary 5.6: Expert vinavina (x-mpiray) sy ny vahoaka vinavina (Y-mpiray) tao miavaka fifanarahana, rehefa Coding 18 antoko fandaharan'asan'izy avy amin'ny Grande-Bretagne (Benoit et al. 2015) . Kolaka izany ny fandaharan'asan'izy ireo avy amin'ny antoko politika telo (Toroana, Asa, Liberaly Demokraty) sy enina fifidianana (1987, 1992, 1997, 2001, 2005, 2010).
Fanorenana izany àry, Benoit sy ny mpiara-miasa nampiasa ny vahoaka-Coding rafitra hanao fikarohana izay azo atao ny Manifesto Project. Ohatra, ny Manifesto Tetikasa dia tsy code 'ny fandaharan'asan'izy momba ny lohahevitra momba ny fifindra-monina, satria izany dia tsy ho salient lohahevitra rehefa rafitra ny Coding dia Nanjary tao amin'ny tapaky ny taona 1980. Ary, amin'izao fotoana, dia logistically infeasible ny Manifesto Project mba hiverina ka indray-fehezan-dalàna amin'ny fandaharan'asan'izy ireo mba hisambotra izany vaovao izany. Noho izany, dia mety hiseho ny mpikaroka liana amin'ny fianarana ny politika ny fifindra-monina dia avy ny vintana. Na izany aza, Benoit sy ny mpiara-miasa dia afaka mampiasa ny olombelona computation rafitra hanao izany Coding-namboarina ny fikarohana fanontaniana-haingana sy mora.
Mba nianatra politika ny fifindra-monina, dia kolaka izany ny fandaharan'asan'izy ho valo antoko eo amin'ny 2010 fifidianana any Grande Bretagne. Fehezanteny tsirairay isaky ny fanambarana dia kolaka izany toy ny na mifandraika amin'ny fifindra-monina, ary raha izany, na dia mpanohana ny fifindra-monina, tsy miandany, na manohitra ny fifindra-monina. Tao anatin'ny 5 ora ny fandefasana ny tetikasa, ny vokatra tao. Efa nanangona mihoatra ny 22.000 valinteny amin'ny tanteraka vidin'ny $ 360. Ankoatra izany, ny tombatombana avy amin'ny vahoaka nampiseho miavaka fanekena teo aloha fanadihadiana ny manam-pahaizana. Avy eo, toy ny fitsapana farany, roa volana tatỳ aoriana, ny mpikaroka volen'ny ny vahoaka-Coding. Tao anatin'ny ora vitsivitsy, dia efa namorona vahoaka vaovao-kolaka izany dataset izay mifanentana akaiky ny vahoaka tany am-boalohany-kolaka izany tahirin-kevitra napetraka. Amin'ny teny hafa, ny olombelona no nanampy azy ireo computation mba hiteraka Coding ny andinin-teny ara-politika izay nanaiky tamin'ny manam-pahaizana manokana evaluations ka reproducible. Ankoatra izany, satria ny olombelona dia computation haingana sy mora vidy, dia mora ho azy ireo mba ampanjifaina ny fanangonana antontan'isa ny fikarohana manokana momba ny fifindra-monina fanontaniana.